Glutes siri ike na-elekọta azụ gị | Bezzia
Gluten siri ike na-elekọta azụ gị
Susana godoy | 21/06/2022 16:00 | Mmega ahụ
Ọ bụ ezie na ị gaghị ekwenye, inwe nku siri ike nwere abamuru karịa ka i chere. N'ihi na ọ bụghị naanị banyere ihe anụ ahụ ma ọ bụ aesthetic, ma anyị na-aga a nzọụkwụ n'ihu. N'ihi na imega ahụ́ ebe a pụkwara inyere anyị aka ilekọta azụ anyị. Yabụ, oge eruola iji mmega ahụ kacha mma gbadaa azụmaahịa.
Ị maraworị na taa, n'ihi ọrụ anyị nwere, ọ nwere ike imerụ ahụ ike anyị. Azụ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na ya mere, anyị kwesịrị ilekọta ya na mmega ahụ kachasị mma. Ọ bụghị naanị na anyị ga-achọ mmega ahụ kpọmkwem maka ya, ma dị ka anyị ga-ahụ, glutes nwekwara ọrụ ha bụ isi.
1 Kedu ihe kpatara m ji chọọ glutes siri ike iji lekọta azụ m?
2 Ihe omume kachasị mma maka glutes siri ike
2.1 ụdị squats niile
2.2 Akwa n'elu ubu
2.3 Glute igba
2.4 Ntuziaka Hip
Kedu ihe kpatara m ji chọọ glutes siri ike iji lekọta azụ m?
Nke mbụ, anyị ga-amarịrị ihe kpatara inwe isi ike ga-emetụta azụ anyị. Ọfọn, eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ na mpaghara a, anyị ga-enweta nnukwu uru. N'ime ha, isi ihe siri ike na anyị ga-ebelata mmerụ azụ nwere ike ime. N'ihi na dịka ị maara nke ọma, gluteus medius bụ onye na-ahụ maka ịkwado pelvis. Yabụ, mgbe anyị na-arụ ọrụ ha, mpaghara a ga-akpachara anya yana inwe ike ịkwaga nke ọma. N'ihi na ọ bụrụ na anyị anọdụ ala ruo ogologo oge, azụ ga-ada mbà, ya mere ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ na ya. N'ihi ya ịme psoas bụ ihe kachasị egosi, n'ihi na ọ bụ ya na-ahụ maka ijikọta ahụ dị ala na ogwe ahụ. na mgbe anyị hụrụ mgbu azụ, ha nwere ike isi na mpaghara ahụ pụta.
Mgbe anyị nwere azụ na-adịghị ike, nke a na-eme ka ọnọdụ anyị ghara ịdị mma. Nke na-aga n'ihu na-eduga anyị ikwu banyere nsogbu na mpaghara azụ azụ na nke ahụ ga-emetụta ndị ọzọ. Site na oge anyị nwere ike ịkwado ogwe osisi ahụ, mgbe ahụ, anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ nke ọma maka mmegharị ma hapụ mmerụ ahụ. Ka anyị hụ ihe omume ziri ezi bụ!
Ihe omume kachasị mma maka glutes siri ike
ụdị squats niile
Anyị enweghị ike ịkwanye ha oke n'ihi na n'ikpeazụ, ha ga-alọghachi mgbe niile. Squats bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke ọzụzụ ọ bụla na ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike glutes. Ị nwere ike ime squats nke isi, miri emi na nha ma ọ bụ n'akụkụ. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike inyere onwe gị aka na eriri na-agbanwe agbanwe iji mechaa mgbatị ahụ.
Akwa n'elu ubu
Ọ bụ ihe omume ọzọ dị mfe mana anyị nwere ike ime ka ha sie ike ntakịrị karịa ka ọ dị mkpa. Ọbụlagodi na ọzụzụ dịka Pilates, a na-etinyekwa mmega ahụ dị ka nke a. Ọ bụ banyere ịtụkwasị onwe anyị dina n'azụ anyị na-ehulata ụkwụ anyị. Ugbu a bụ oge ime malite ịrịgo ka ọ nọrọ na-akwado na ọbụ ụkwụ anyị na akụkụ nke ubu. Anyị ga-ekutu ume ma gbadata. Anyị ga-emerịrị glutes na mgbago ọ bụla.
N'ọnọdụ anọ, ị ga-agbatị otu ụkwụ azụ, mana na-amanye gluteus mgbe niile. Na mgbakwunye na ịtụba ụkwụ gị azụ, ị nwekwara ike gbada ya ma mee mmegharị elu. Ị na-ahụ na ihe omume niile na-abịa mgbe niile nwere usoro dị iche iche, iji nwee ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche.
N'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị mmekọ dị ukwuu mgbe anyị kwuru banyere glutes siri ike. N'okwu a, ọ bụkwa pelvic ebuli ma ọ na-esonyere ya na obere arọ n'ụdị mmanya. Ị ga-edina n'elu oche ihu elu, na-akwado mgbe niile akụkụ elu nke azụ yana isi. A na-edobe ụkwụ ya na akụkụ 90º. Ogwe ị ga-etinye ya na pelvis ma mee ngwa ngwa elu elu. Mgbe ahụ, anyị ga-agbada dị ka à ga-asị na anyị ga-anọdụ ala n'ala wee gbagoo ọzọ, na-etinye ahụ ahụ dị ka anyị kwuru na mbụ. Malite na obere ibu na nke nta nke nta ị nwere ike ịbawanye ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Gluten siri ike na-elekọta azụ gị
Usoro okpomọkụ na-enye ume ọhụrụ nke nyiwe na-enye